Cameron.....: Of Love....
အချစ်ဆိုတာ ဒီနေ့ဒီချိန်ထိ ဘယ်ဒဿနပညာရှင်ကမှ အဓိပ္ပါယ်တိတိကျကျ မပြောပြခဲ့နိုင်သေးလောက်အောင် တကယ့်ကိုပဲ နက်ရှိုင်းလှတဲ့ အနုစိတ်ဆုံးအနုပညာပါ...။ ပညာရှင်တွေတောင် သေချာမသိနိုင်သေးတဲ့ အဲဒီစိတ္တဇနမ်အကြောင်းကို ကျမကလဲ ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲနော်...။
တကယ်တော့ အချစ်ဆိုတာ လူတစ်ယောက်ချင်းဆီရဲ့ခံစားမှုနဲ့အတွေးပုံကို အဲဒီတစ်ယောက်ချင်းဆီကပဲ ဖော်ပြပေးလို့ အချစ်ကို တစ်မျိုးဆီ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်..။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူဦးရေသန်းနဲ့ချီရှိလေတော့ အချစ်ရဲ့အမြင်ကလဲ သန်းနဲ့ချီရှိပါလိမ့်မယ်...။ ဒါကြောင့်လူအမျိုးမျိုး အချစ်ကို မြင်တတ်ကြပုံခြင်းလဲကွာခြားပါလိမ့်မယ်..။
အချစ်ဆိုသည်မှာ....ဆိုလို့ ကိုငှက်ရဲ့သီချင်းကိုတောင် သတိရမိပါရဲ့....။ “အချစ်ဆိုသည်မှာ ကြည်နူးကြခိုက်လမင်းတစ်ရာ...အချစ်ဆိုသည်မှာ ၀မ်းနည်းတဲ့အခိုက် နေမင်းကဋေကဋာ”တဲ့....။ ဟုတ်တာပဲ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အရမ်းအသည်းအသန် ချစ်နေကြချိန်တော့ မိုးမမြင်လေမမြင်ပေါ့ လမင်းအစင်းတစ်ရာ အလင်းအားကြောင့် ဘာမှမမြင်ကြတော့တာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်...။ အဲ အထင်အမြင်တွေလွဲမှားပြီး တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် စိတ်ဆိုးကြတဲ့အခါမှာတော့ သောက ပဋိဒေ၀မီးတွေက ဟုန်းဟုန်းတောက်လိုက်တာ နေဆယ်စင်းလောက်ပူလောင်ပါတယ်...။
ကျမတို့ မြန်မာလူမျိုးမှာတော့ သီချင်းတောင်ရှိပါသေးတယ် “တူနှစ်ကိုယ် တဲအိုပျက်မှာနေပြီး ထမင်းရေပဲ သောက်ရသောက်ရ”တဲ့ သူ့အချစ်ဖော်ပြပုံက အရမ်းကိုရိုးသားလွန်းပါတယ်...ချစ်သူနှစ်ယောက်ဟာ ခုဘက်ခေတ်တွေလို ဘာအတွက်အချက် ငဲ့ညာမှုမှ မရှိဘဲနဲ့ကို ရိုးစင်းစွာချစ်တတ်ကြပုံပါ...။
Savage Garden ရဲ့ “Truly, Deeply, Madly” သီချင်းထဲက Chorus အပိုဒ်ကလေးပါ...။ ချစ်သူနဲ့အတူ အမြင့်ဆုံးတောင်ပေါ်မှာလဲ အတူရှိနေချင်တယ်... အနက်ရှိုင်းဆုံးပင်လယ်ပြင်မှာလဲ အတူကူးခတ်ချင်တယ်... ကောင်းကင်ကြီးပြိုကျမယ့်နေ့အထိ အတူရှိနေချင်တယ် တဲ့...။ အဲဒီသီချင်းတစ်ပုဒ်လုံးက ရေးစပ်ထားတာ စာသားအစအဆုံး သိပ်ကို နူးညံ့လှပတယ်...။ ဒါချစ်သူအပေါ် သူ့ရဲ့အချစ်အင်အား ကြီးမားကြောင်းကိုဖော်ပြတာ..။
တချို့ဆိုရင် မိုးကောင်းကင်ထက်က ဓူဝံကြယ်ကိုဆွတ်ခူးပေးရမလား...အဲလိုပေါ့...။ တကယ်တော့ ဘယ်လိုလုပ် တတ်နိုင်မလဲ...။ ဒါက သူ့စိတ်ထဲက ခံစားမှုကို ခိုင်းနှိုင်းထားတာ...။ မကောင်းမြင်ဝါဒအရဆိုရင်တော့ ဒါ...လျှာအရိုးမရှိတိုင်း ပြောနေတာပေါ့...။ အဲလိုပြောတဲ့လူလဲ ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်...။
Richard Marx ကလဲ Now and Forever ဆိုတဲ့သီချင်း နောက်ဆုံးပိုဒ်လေးမှာ သူ့အချစ်ကို...ဟောဒီလို လှလှပပကလေး သီကုံးထားပါသေးတယ်....။
အချစ်မှာ တစ်ဘက်သတ်အချစ် One Side Love ကတော့ အပူအချစ်လို့ ကျမမှတ်ယူပါတယ်...။ တစ်ဘက်လူ မသိ တိတ်တခိုးကြိတ်ပိုးရတဲ့ အုံ့ပုန်းအချစ်လေ..။ ဒီတော့ တစ်ယောက်တည်းကြိတ်ခံစားရ...ပူလောင်ရနဲ့... ကြာလာတော့ မှေးမှိန်သွားကောင်း မှေးမှိန်သွားမယ် မဟုတ်ရင်တော့ ပေါက်ကွဲမယ် ဒေါသဖြစ်မယ်ပေါ့...။ ထွက်ပေါက်ကိုယ်စီတော့ ရှိကြမှာပေါ့...။ တုန့်ပြန်မှုမှရှိတဲ့ အချစ်အတွက် သီချင်းတွေဆိုပြီး ရင်ဖွင့်ပေါက်ကွဲမယ်...။ စာတွေရေးမယ်...ကဗျာတွေရေးမယ် စသဖြင့်အမျိုးမျိုးပေါ့...။ တချို့ကျတော့လဲ နာကျင်လွန်းလို့ထင်ပါရဲ့ “မင်းကိုချစ်ရတာ ကိုယ့်လက်မောင်းသွေးကို ဖေါက်ထုတ်ပစ်ရသလိုပဲ တဆစ်ဆစ်နဲ့ နာကျင်တယ်”တဲ့...။ ဒါကတော့ ကိုယ့်အပြစ်နဲ့ကိုယ်လို့ ကျမမြင်ပါတယ်...။ ဘယ်သူကမှ အဲဒီလိုဖြစ်ပါ ခံစားပါလို့မတိုက်တွန်းဘူးလေ...။ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ့်စိတ်ဆန္ဒအရဖြစ်လာတာပဲ...။ ခုခေတ်လူငယ်တွေ အတော်များများ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတာပါ...ဒါမျိုးက ။ ရင့်ကျက်တဲ့အရွယ်မှာတော့ ဒါတွေကဟာ...လေးလေးဝါးပါပဲ။
အချစ်ကို ဒူးထောက် အရှုံးပေးတတ်ကြတဲ့ အချစ်သမားတွေကျတော့လဲ သူတို့ခံစားချက်ကို ဖွဲ့ပါတယ်...ဒီလို....။
တကယ်တော့ အချစ်ဆိုတာ အချစ်ပါပဲ....။ ရိုးရိုးလေးပဲတွေးပါ ရိုးရိုးလေးပဲချစ်ပါ....။ လူတွေဟာ ကိုယ့်ခံစားချက်နဲ့ကိုယ်စီ ရူးသွပ်နေကြတာကို အချစ်ဆိုတဲ့ စိတ္တဇနမ်ကို ခုတုံးလုပ်ပြီး သူ့တို့ အတ္တထဲရောက်အောင် ဆွဲသွင်းနေကြတာပါ...။
ကဲ...ကျမတို့ ဒဿနပညာရှင်တွေ ကမ္ဘာကျော်ကဗျာဆရာကြီးတွေ ဆိုမိန့်ခဲ့တာများကို ကြည့်ကြရအောင်...။
ဦးစွာပထမ မြင်မြင်ချင်းချစ်မိတယ် (Love at first sight) ဆိုတဲ့ စကားတချို့ကို အရင်ကောက်ပြောရရင် အင်္ဂလိပ်ကဗျာဆရာ ဘာနဘီဂူးခ်ျ (Barnaby Googe)(၁၅၄၀-၉၄)ရဲ့ ကဗျာမှာ၊
ဒါလောက်ချစ်စရာ ချိုရွှင်ကြင်နာတဲ့ မျက်နှာမျိုး တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးပါဘူးတဲ့..။ ဖြတ်သွားတာလောက် မြင်ရုံမြင်မိလိုက်တာနဲ့ သက်ဆုံးတိုင် ချစ်သွားမိသတဲ့...။
စကော့ကဗျာဆရာ ရောဘတ်ဘန်းစ်(Robert Burns)(၁၇၅၉-၉၆) ကလည်း သူ့ထက်မလျော့ဘူး။
For nature made her what she is and ne'er made anither! တဲ့။
Love is Blind ဆိုတဲ့ စကားကို စပြောသူက အင်္ဂလိပ်စာဆိုကြီး ချောဆား(Geoffrey Chaucer)(၁၃၄၃-၁၄၀၀ခန့်) ပါ..။
အသားမဲလေးကို နီရွှေရောင်လေးလို့မြင်တယ်..ပိန်တာရိုးကို သမင်မလို့မြင်တယ်... အထုံအအက က္ကနြေ္ဒရတဲ့ မိန်းမဖြစ်သွားတယ်..။
မျက်ကန်းအချစ်သမားတွေကို သရော်သူတွေက သရော်နေချိန်မှာ အင်္ဂလိပ်ပညာရှိ ဖရန်စစ်ဘေကွန် (Francis Bacon )(၁၅၆၁-၁၆၂၆)ကတော့ အခုလို မှတ်ချက်စကားဆိုပါတယ်။
It is impossible to love and be wise တဲ့..။ 'Of Love ခေါင်းစဉ်တပ် အက်ဆေးမှာ ရေးခဲ့တာ..။ ချစ်မိပြီဆိုတဲ့နောက်မှာ မျက်စိသာမဟုတ် စဉ်းစားဥာဏ်ပါ မရှိနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ သဘော..။
ရှိတ်စပီးယားကပြောတယ် (William Shakespear)(၁၅၆၄-၁၆၁၆) ကလည်း ပြောပါတယ်..။ ချစ်လည်းချစ်ဖို့ စဉ်းစားဆင်ခြင်ဥာဏ်လည်းရှိဖို့ဆိုတာ လူ့စွမ်းအားနယ်ပယ်ကို ကျော်လွန်သွားတဲ့ ကိစ္စပါတဲ့...။
အချစ်အကြောင်းစကားစုကို ချစ်ရေးချစ်ရာကိစ္စနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး ကမ္ဘာမှာ ထင်ရှားတဲ့ မင်းဧကရာဇ်နှစ်ပါးရဲ့ စကားနှစ်ခွန်းနဲ့ နိဂုံးချုပ်ပါရစေ...။
တစ်ခွန်းက ပြင်သစ်ဧကရာဇ် နပိုလီယန်(၁၇၆၉-၁၈၂၁) ရဲ့စကားပါ..။ အချစ်ဆိုတာကို သူ့အတွေ့အကြုံနဲ့ယှဉ်ပြီး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်သွားပုံပါပဲ..။
Love is the idler's occupation, the warrior's relaxation, and the sovereign's ruination. တဲ့..။
အချစ်ဟာ လူပေါ်ကြော့တွေအတွက် အလုပ်အကိုင်တစ်ခုဖြစ်သလို၊ စစ်ပွဲဆင်နွှဲသူများအတွက် အပန်းဖြေမှုတစ်ခုဖြစ်တယ်။ (ဒါပေမယ့်) မင်းစိုးရာဇာများအတွက်တော့ ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းတစ်ခုပါတဲ့..။
နပိုလီယန်က သံဝေဂသံနဲ့ အဲသလို ဆိုခဲ့ပေမယ့် သူ့နောက်မှလာတဲ့ ရှင်ဘုရင် ချစ်သမား အက်ဒွပ် (နောင် ၀င်ဆာမြို့စား)(၁၈၉၄-၁၉၇၂) ကတော့ ဒီစကားက သင်ခန်းစာယူနိုင်ပုံမရဘူး...။
ဗြိတိန်ပြည်မှာ အဌမမြောက် အက်ဒွပ်ဘုရင် အဖြစ် နန်းတက်ခဲ့တဲ့ ဝေလမင်းသားဟာ သူ့ချစ်သူကို လက်ထပ်ခွင့်မရတဲ့အတွက် ထီးနန်းကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့တယ်..။ အဲဒီကာလ သူပြောခဲ့တဲ့ နှုတ်ဆက်မိန့်ခွန်းထဲမှာ၊
ကျနော်ချစ်တဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ ကူညီဖေးမမှုမပါပဲနဲ့တော့ ဒီကြီးလေးတဲ့ တာဝန်ကို ထမ်းပိုးဖို့ ရှင်ဘုရင် ၀တ္တရားတွေကို ကျနော် စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်း ဆောင်ရွက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးတဲ့..။ သူကပြောသွားခဲ့တယ်..။
Posted by coral nyo at 07:58
အစ်မ မိုးငွေ့က အချစ်အကြောင်း အတော်လေ့လာထားတာပဲနော်...
အချစ်ကို သီချင်း ကဗျာ သမိုင်းတွေနဲ့ 
ဗဟုသုတလည်းရပါတယ် . . .
မမရေ အရေးအသားတွေ အရမ်းတက်လာတယ်ဗျ
လေးစားမိတယ် ကောင်းလိုက်တဲ့ ပို့စ်လေး
21 January 2010 at 21:53
“မမိုး”ပြောတဲ့ အချစ်အကြောင်းလေး လာဖတ်သွားတယ်နော်...
အခုမှ စာကြွေးတွေ တစ်အိမ်တက် တစ်အိမ်ဆင်း လိုက်ဆပ်နေရတယ်...။